Football Khabar » बार्यन म्युनिखको फराकिलो जित : १४ मिनेटमा लेवान्डोस्कीको ४ गोल !
बार्यन म्युनिखको फराकिलो जित : १४ मिनेटमा लेवान्डोस्कीको ४ गोल !
पोलिस फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्की एक्लैले ४ गोल गरेपछि जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ । नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको दोस्रो लेगको खेलमा बार्यनले क्रेभेना ज्भेज्दालाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–६ को हार चखायो ।
बार्यनको जितमा लेवान्डोस्की नायक बने । उनले एक पेनाल्टी गोलसहित ४ गोल ठोके । बार्यनले एक पक्षीय बनाएको खेलमा ३ जना खेलाडीले गोल गरे । बार्यनले खेलको १४औं मिनेटमा लियोन गोरेट्जाको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । सोही गोलको मदतमा बार्यनले पहिलो हाफमा ०–१ को अग्रता बनायो ।
तर, दोस्रो हाफमा बार्यनले गोलको वर्षा नै गरिदियो । जहाँ लेवान्डोस्कीले १४ मिनेटको बीचमा ४ गोल गरे । उनले खेलको ५३औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत् पहिलो गोल गर्दा ६०औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरे । त्यसपछि ६४औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरे भने ६७औं मिनेटमा व्यक्तिगत चौथो गोल थपे ।
बार्यन त्यत्तिमै अडिएन । खेलको ८९औं मिनेटमा कोरेन्टिन टोलिसोले गोल गरेपछि खेल बार्यनले ०–६ ले जित्यो । अब यो जितसँगै बार्यन समूह ‘बी’बाट समूह विजेता बनेर अन्तिम १६ मा पनि प्रवेश गरेको छ । सोही समूहबाट टोटनह्याम पनि अन्तिम १६ मा प्रवेश गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति ११ मंसिर २०७६, बुधबार ०४:२०